Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. डेंगु नियन्त्रणको लागि सरकारी प्रयास के भइरहेको छ ? – Emountain TV
डेंगु नियन्त्रणको लागि सरकारी प्रयास के भइरहेको छ ?
काठमाडौं, २५ भदौ । डेंगुले अहिले महामारीको रुप लिएपछि सर्वत्र चिन्ता बढेको छ । पांच महिना अघि सुनसरीको धरानमा देखिएको डेंगु हाल सातै प्रदेशका ५६ जिल्लामा फैलिसकेको छ । डेंगुवाट ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ हजार बढी संक्रमीत भएका छन् । यसबाट सर्वसाधरण मात्र होइन चिकित्सकदेखि मन्त्रीसम्म संक्रमित भएका छन् । यस्तो अवस्था आइसक्दा पनि नियन्त्रणको लागि सरकारी प्रयास के भइरहेको छ ? हरेक नागरिकको मनमा प्रश्न उठिरहेको छ ।
लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने रोग डेंगु गत गत बैंशाख महिनामा धरानबाट देखिएको थियो । त्यसयता ७ वटै प्रदेशका ५६ जिल्लामा फैलीसकेको छ । डेंगुबाट ६ हजार बढी संक्रमीत भएका छन् भने ६ जनाको मृत्यु समेत भैसकेको छ । यो तथ्याँक अस्पतालमा आएका परीक्षणको आधारमा हो । तर परीक्षणमा आउन नसकेका यो भन्दा कयौं गुणा बढी भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । संक्रमणको रफ्तार तिव्र छ ।
काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा जांच्न आउने विरामी मध्ये ५० प्रतिशतमा डेंगु दिएको छ । अन्य अस्पतालमा पनि विरामीको संख्या बढ्दो छ, जसले उपचार अभाव देखिन थालेको छ । अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेका कारण घण्टौ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
डेंगु संक्रमणपछि मानिसमा उच्च ज्वरो आउने गर्छ । डेंगु भए नभएको थाहा पाउन रगत परीक्षण गर्ने गरिएपनि यसको विशेष उपचार बिधि भने देखीदैन । सरकारले डेंगु संक्रमीतका लागी सिटामोल जिवनजल निशुल्क रुपमा बितरण गर्ने गरेको छ ।
डेंगु प्रभावित क्षेत्रका अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी अपुग भएमा त्यसको व्यवस्था गर्ने,उपचारका लागी किटको व्यवस्थापन लगाएत विरामीको उपचारमा कुनै कमि आउन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरतरहको सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको छ । मन्त्रालयले प्रभावीत क्षेत्रका अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु बिदामा नवस्नको लागी परिपत्र जारी गरी उपचारलाइ अघि बढाएको छ ।
हाल तिनै तहका सरकारहरु बिच समन्वय गरी जनचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै गैर सरकारी संस्था, स्थानीय निकायको अगुवाईमा नेपालभर डेंगु संक्रमणका लक्षण र बच्ने उपायका बारेमा घरघरमा जनचेतना फैलाउने काम भइरहेको स्वास्थ्य मंत्रालयको दाबी छ ।
कतिपय स्थानमा लामखुट्टेको अण्डा नष्ट गर्नको लागी सैनिक, प्रहरीको समेत सहायता लिइएको अवस्था छ । तरपनि डेंगु नियन्त्रणमा आउन भने सकेको छैन । लामखुट्टेले सफा पानीमा अण्डा पार्ने भएकाले डेंगुबाट बच्न हरेक नागरीक आफैं सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालको नयाँ भवन समितिलाई हस्तान्तरण
इलाम अस्पतालमा रुघाखोकी र भाइरल ज्वरोका विरामी बढी
डेंगु संक्रमणका सम्बन्धमा जानकारी दिन सभामुखको रुलिङ्ग
चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप